Antony lehibe iray itiavako ireo Forms Gravity dia ny fitehirizany ny angona eo an-toerana. Ireo fampidirana rehetra ho an'ny hery misintona Forms dia hamindra ny angona avy eo amin'ny rafitry ny antoko fahatelo. Ilaina izany ho an'ny mpanjifako… Tsy tiako ho very ny angon-drakitra raha midina ny API antoko fahatelo na misy karazana olana fanamarinana hafa. Ny ankamaroan'ny endrika fifandraisana tsotra eny an-tsena dia tsy manao izany.
Ankoatr'izay, miaraka amin'ireo fitaovana toa an'i ReCaptcha sy Google Maps izay miasa ao ivelan'ny boaty, rafitra iray ihany izy io. Nividy lisansa tranokala tsy voafetra aho taona lasa izay ary nampiasa azy io saika tamin'ny vahaolana mety ho azonao eritreretina.
Tongasoa eto GravityView! GravityView dia plugin WordPress azonao ampiasaina hanontana ny angon-drakitra Gravity Forms. Mahafinaritra izany - ary nahazo ny fitahian'ny Gravity Forms aza izy ho vahaolana tadiavina.
GravityView dia manolotra ny fahaizana manangana fomba fijery tsy manam-petra, mankasitraka ary mandà ny fidirana alohan'ny andehanan'izy ireo mivantana, ary ahafahan'ny fanovana ireo fidirana ireo avy eo aloha. Atambaro ny WordPress, ny Forms Gravity, ary ny Gravity View, ary manana rafitra fitantanana atiny feno mahay ianao izay afaka manangona sy mampiseho angona araka izay tianao.
Mora be izany!